कोरोनाको उपचार खोजीमा सफलता नजिकै पुगेका वैज्ञानिकको गो’ली हानी ह’त्या – Online Nepal
May 7, 2020 506
काठमाडौं। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरको सुरुवात चीनको वुहान शहरबाट भएको थियो । यही कारण विश्वका कैयौं देशले चीनमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । चीनले भने यी सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । यही बीचमा चीनमा कोरोनाभाइरसका विषयमा अनुसन्धानमा सक्रिय एक अनुसन्धानकतोको गोली हानेर ह’त्या गरिएको छ ।
दावीका अनुसार पिट्सबर्ग मेडिकल सेन्टरमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता डा. बिंग लिउले कोरोनाभाइरसका विषयमा निकै ठूलो खोजी गरेका थिए । बिंग लिउ आफ्नो खोजीलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थिए । तर, उनले आफ्नो खोजी सार्वजनिक गर्न नपाउँदै उनको गो’ली हा’नेर ह’त्या गरिएको छ । यससँगै उनले के बताउन चाहन्थे र उनको खुलासा चीनले सार्वजनिक गर्न चाहँदैनथ्यो भन्ने विषयमा कैयौं प्रश्नहरु उठाइएका छन् ।
बिंग लिउलाई गो’ली हानेर ह’त्या गर्ने व्यक्तिले पछि आफूलाई पनि गो’ली हानेर आ’त्मह’त्या गरेका छन् । ३७ वर्षका बिंग लिउ एक्लै बस्थे र रस इलाकामा उनको अपार्टमेन्टमा पसेर एक व्यक्तिले उनलाई गो ली हानेका थिए । सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार लिउको टाउको, घाँटी र शरीरका अन्य भागमा गो ली लागेको छ जसका कारण उनको घटनास्थलमै मृ’त्यु भयो ।
रिपोर्टमा अनुसार जतिबेला आ’क्रमणकारी उनको घरमा आएका थिए त्यतिबेला डाक्टरकी श्रमिती घरमा थिइनन् । युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेन्टरले रिसर्चर लिउको मृत्युमा दुःख व्यक्त गर्दै उनी कोरोनाभाइरसका विषयमा ठूलो खोजीको नजिकै पुगेको र छिटै यसको उपचार खोज्नेवाला बएको बताएको छ ।
Prevदैनिक व्यायम गर्दै राजेश हमाल
Nextअस्पतालको झ्यालबाट तीन जना चिकित्सक हामफाले
टिपरको ठक्करबाट ३० वर्षीय महेशको घटनास्थलमै मृ*त्यु
कोरोनाको सुरुवात भएको झन्डै १ बर्ष बित्दा WHO ले दियो बिश्वलाइ हल्लाउने चेतावनी।
कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि यो ठाउँमा पुनः लकडाउन लगाइयो
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62141)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (51096)